August 18, 2019 - Myitter
မြောက်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အဖွဲ့မှ ကွတ်ခိုင်အထက် မိုင် (၂၂၉) တပ်စခန်းကုန်းတွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်သည်ဟုသိရ
August 18, 2019 Myitter 0
မနက် ၉နာရီလောက်အထိ ကွတ်ခိုင်အပါအဝင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားမှု မရှိပေမယ့်လည်း အဲဒီနောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ကွတ်က နမ့်ကွတ်ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဆေးခန်းမှာ နေရာချထားတဲ့ တပ်တွေနဲ့ ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့ ပစ်ခတ်နေကြတယ်လို့ ဗြဟ္မစိုရ်အသင်းကနေသိရ ပါတယ်။ “မနေ့ကတည်းက နမ့်ကွတ်ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဆေးခန်းမှာ တပ်ကလာနေရာယူလိုက်တာ၊ အဲဒီနေရာမှာ အခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ၊ မြို့ပေါ်ကနေ အသံတွေကြားနေရတယ်။ အထိအခိုက်ရှိတာတော့ […]
အိပ်မက်ကလေးပဲ ဖြစ်မယ် မောင် တမလွန်ဆိုတာ မိုးရွာလေ့ ရှိသလား မောင် အချိန်တိုတိုလေးမှာပဲမောင့်ရဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးလည်း တိုသွားတယ်… ဘယ်လိုဘုရားသခင်မျိုးရဲ့လက်နဲ့မှ စစ်ပွဲတွေကို သတ်လို့ရမလဲ…။ အိပ်မက်ကလေးလည်း ဖြစ်မယ် မောင်အိပ်မက်ဆိုတာလည်း အိမ်ထဲမှာပဲ ရှိလိမ့်မယ်မောင် မမြင်ဖူးတဲ့ သားလေးကမောင့်ကိုလည်း မြင်ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူးဒါမင်းဖေဖေလို့ ဓာတ်ပုံကလေးပြမိတဲ့ခါကလေးပြန်ပြောမယ့် စကားတွေကကျွန်မအတွက် အလျော်အစားလည်း […]
ချစ်တင်းနှောလို့ပြီးသွားတဲ့အချိန် ဒါတွေ လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ (အချစ်ပညာပေး)
လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နေ့စဉ်ဘဝမှာ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ မပါမဖြစ်ပဲမလား။ အဲ့တော့ ချစ်တဲ့သူနှစ်ဦး ချစ်တင်းနှောပြီးတဲ့အချိန်တိုင်း လုပ်မိတတ်တဲ့ အမှားလေးတွေနဲ့ ဘာတွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကို ခုဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ၁။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရေအမြန်ချိုးခိုင်းတာမျိုးကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ သာယာမှုနဲ့ ချစ်ကြည်နူးမှုတွေ ပြည့်ဝနေတယ်ဆိုပေမယ့် […]
ပြည်သူများ သတိဝီရိယဖြင့် နေထိုင်သွားလာကြရန် RCSS အဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်
ပြည်သူများ သတိဝီရိယဖြင့် နေထိုင်သွားလာကြရန် RCSS အဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ဘယ်လောက်ကြာမယ် မခန့်မှန်းနိုင်တာကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ သတိဝီရိယနဲ့ နေထိုင်သွားလာကြဖို့ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာ မူဆယ်-မန္တလေးလမ်းပေါ်က တံတားတချို့ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခံထားရတာကြောင့် […]
ကံသီ​ပေလို့သာ​ပေါ့……..? ကျွန်​​တော်​မ​နေ့ညက (၁၆) နှစ်​အရွယ်​မိန်းခ​လေးတစ်​ဦးဘဝကိုကယ်​တင်​လိုက်​တယ်​။ (မှတ်​ချက်​)ဒီပို့စ်​ကိုတင်​ချင်းသည်​နာမည်​ကြီးချင်​လို့မဟုတ်​, သူရဲ​ကောင်းဖြစ်​ချင်​လို့မဟုတ်​ ,ကာယကံရှင်​ရဲ့ခွင့်​ပြုချက်​ဖြင့်​ ​နောက်​ထပ်​ဒီလိုအရွယ်​မိန်းခ​လေးများအမှားမဖြစ်​​အောင်​သင်​ခန်းစာယူရန်​တင်​ပြခြင်းဖြစ်​ပါသည်​။ (16,8,19)ရက်​​နေ့အချိန်​ကည (10)နာရီဝန်​ကျင်​ကျွန်​​တော်​အလုပ်​ကိစ္စဖြင့်​အပြင်​ကပြန်​လာချိန်​သာ​ကေတုမြို့နယ်​ (7)​ဈေးလမ်းဆုံ ကားမှတ်​တိုင်​တွင်​ (၁၆)နှစ်​အရွယ်​မိန်းခ​လေးတစိ​ယောက်​ငိုရှိုက်​​နေသည်​။ လက်​ထဲမှာထမင်းချိုင့်​အ​သေးတစ်​လုံး , ​နောက်​မှာ​ကျောပိုးအိတ်​တစ်​လုံးလွယ်​ထားသည်​။ သူ့အနားမှာ​ အမူးသမားနှစ်​ဦးစည်းရုံး​ပြီးသူမကို ​ခေါ်​နေသည်​။ ညနက်​​တော့ကားမှတ်​တိုင်​ကလည်းလူပျက်​ ​နေရာကလည်း​မှောင်​ ​ကောင်​မ​လေးကလည်းငို ကျွန်​​တော်​လည်းကြည့်​ရတာပုံစံမကျလို့ဝင်​စပ်​စု​တော့ သူ့ရဲ့ဖုန်းကား​ပေါ်မှာခါးပိုက်​နှိုက်​ခံရ​ကြောင်း အဲ့ဒီဖုန်း​ပျောက်​သွားတဲ့အတွက်​အ​မေရိုက်​မှာ​ကြောက်​လို့အိမ်​မပြန်​ရဲ​တော့​ကြောင်း […]
ဘိန်းစစ်ပွဲ စပြီလော မကြာခင် ဇူလိုင် ၂၇-၂၈ မှာ ကွတ်ခိုင်နားက ရွာ ၂ ရွာကမူးယစ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာ ၂ ခု ကို တပ်/ရဲ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က. ဝင်စီးတယ်.. သိန်းပေါင်း သိန်းချီတဲ့ မူးယစ်ဆေးနဲ့ဆေးထုတ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ သိမ်းမိတယ်.. အဲဒီ ၂ လအတွင်း.နောင်ချိုဂိတ်မှာ […]
မြန်မာပြည်က လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အများစုရဲ့ ရိုးသားမှု မရှိတဲ့ နောက်ကွယ် ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ အထင်ရှားဆုံး နဲ့ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး လုပ်ရပ်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီး နှိမ်နင်းတာပဲ။ ငွေကြေးဖောင်းပွ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်တာက အစ တခြား ကျန်းမာရေး ပညာရေး ဘက်ပေါင်းစုံကနိမ့်ကျနေခြင်းရဲ့ အဓိက သော့ချက်ထဲမှာ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား […]
လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုတိုက်ခိုက်​ခြင်း စတင်​ပြီ
ပြင်းထန်​သည့်​ စစ်​​ရေးအရ အ​ရေးယူမှု့ စတင်​​… တပ်မ​တော်​က ပစ်​ခတ်​တိုက်​ခိုက်​မှု့ ရပ်​ဆဲ​ပေးထားတယ်​…..သူပုန်​အဖွဲ စစ်​​ရေးဖိအားမရှိ​တော့ အင်းအားစုဖွဲ့တယ်​… တည်​ငြိမ်​မှု့ ရရှိ ​အေးချမ်း​နေပြီဖြစ်​တဲ့ ဧရိယာထဲကို အင်​အား​တွေ တစ်​စ တစ်​စ ပို့လွှတ်​ စုဖွဲ့တယ်​…. လာရှိုးမြို့ နမ့်တွန်းကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲတွင် တပ်မတော်က ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုတိုက်ခိုက်​ခြင်း စတင်​ပြီ….. […]